Kaqeybgalka Maahan Tilmaame Waxqabadka Suuqgeynta (KPI) ee Shirkadaha Badankood | Martech Zone
Kaqeybgalka Maahan Tilmaame Waxqabadka Suuqgeynta (KPI) ee Shirkadaha badankood
Talaado, Disembar 16, 2008 Talaado, Maarso 2, 2021 Douglas Karr
Ha i aaminin? Immisa lacag ah ayay shirkaddaadu ka sameysaa faallooyinka? Immisa lacag ah ayay shirkaddaadu ka sameysaa dadkaas wax ka sheegaya? Immisa lacag ah ayay shirkaddaadu ka sameysaa dadka ka faalooda qoraaladaaga warbaahinta bulshada?
Hawlgelinta, sida lagu qiyaaso faallooyinka ama kaqeybgalka, is wax aan jirin oo u badan ganacsiyada. Qaar badan khubaro waxay qiyaasayaan qiyaasahan cajiibka ah, iyagoo sheegaya inay si uun u horseedi doonaan dakhli, sida bakayle ka soo jiidaya koofiyad. Kuwani waa isla wiilashii xayeysiiyay xayeysiisyada sharaabaadyada 'Super Bowl' ee shirkadaha ka baxay ganacsiga.
Ma jiraa qof cadeeyay isku xirnaanta baraha bulshada ama baloog cadeeyay xiriirka tooska ah ee udhaxeeya iyo faallooyinka? Bogagga aan arkay, faallooyinka waxaa qorey dad aan waligood iibsanaynin… asxaabta, asxaabta, kuwa diiddan, iyo dadyowga isku dayaya inay dhisaan maamulka khadka tooska ah. Dhamaantood, shaki ayaa ku jira in midkoodna wax iibsanayo.
Kaqeybgalka waa inaan waligiis lagu cabirin faallooyinka ama jawaabaha warbaahinta bulshada ilaa aad toos ugu xiri karto isdhexgalkaas dakhliga soo socda. Faallooyinka iyo wadahadalku waa inaysan waligood noqon halbeeg lagu kasbado meheradda illaa aad caddeyn karto inay saameyn ku leeyihiin sicirkaaga beddelka.
Waxa Ka Reebban: Sumcad Internetka ah
Mid ka mid ah waxtarka aan tooska ahayn waa jawaabaha togan ee laga helo baraha bulshada, taas oo hagaajin karta sumcadda meheraddaada ee internetka - ugu dambeyntiina u horseedi doonta macaamiisha kale ama ganacsiyada inay kaa iibsadaan adiga oo ku saleynaya sumcaddaas. Amaanadaas iyo talooyinkaas waa dahab saafi ah… laakiin inta badan waa ay adagtahay in miino laga dhigo baraha bulshada.
Ma rabtaa inaad ahaato hawlan macaamiishaada? Haa! Su’aashu waxay tahay: Ma dad yaa waa hawlan run ahaantii macaamiisha? Malaha maya!
Ma isku dayayo inaan muujiyo ixtiraam darro ama aan ka qaado qadarinta aan u hayo kuwa idinka mid ah ee kaqeybqaata barahayga. Waan jeclahay faallooyinka! Faallooyinka ayaa ah waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha aan aaminsanahay inay sidoo kale gacan ka geystaan ​​sii wadida bogaggeyga wadahadalka iyo matoorada raadinta. Taasi waxay si aan toos ahayn uga dhigan tahay dakhli aniga maxaa yeelay waxaan muujin karaa isku xirnaan toos ah oo udhaxeysa tirada faallooyinka iyo tirada xayeysiinta la riixay.
Adigu ma socotid daabicis, in kastoo. Waxaad wadaa ganacsi.
Haddaba Waa Maxay Hawlgelinta?
Hawlgelinta waa wicitaan taleefan, codsi demo, soo dejin diiwaangashan, codsi soo jeedin… ama iibsi dhab ah. Kaqeybgalka waa waxqabad kasta oo si toos ah loogu sifeyn karo dakhliga soo gelitaankaaga internetka uu soo saarayo.
Haddii shirkaddaadu ay cabireyso waxtarka bartaada, waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso runta Ku noqo Maalgashiga Suuqgeynta:
ROMI = (Beddelka * Dakhliga) / (Wadarta Qiimaha Shaqaalaha + Wadarta Qiimaha Madal)
Aynu ka takhalusno tan hawlgelinta hocus-pocus oo bilow inaad ka hadasho qiyaasta dhabta ah ee guusha… imisa lacag ah ayay shirkaddaadu ku helaysaa dadaalkeeda suuq-geynta dijitaalka ah.
Runtii taasi maahan wax adag. Mid ka mid ah tusaalaha ayaa ah aqoonsigii ugu dambeeyay ee Dell ee ahaa inay awood u yeesheen ka faa'iideysiga Twitter in ka badan $ 1,000,000 dakhli!
Cabir waxa tirinta! Haddii shirkaddaadu ku hawlan tahay istiraatiijiyado warbaahinta bulshada ah, taasi waa wax cajiib ah. Daacad noqo, noqo mid hufan, fur waddo xiriir oo rajadaada ah (badiyaa baaraya) oo cabir saamaynta shaqadaada adag… lacag ahaan!
Tags: faallooyinka blogcommentshawlgelintakpisuuqgeynta kpifaallooyinka goobtahawlgelinta bogga
Teknolojiyad Weyn Oo Qaab Weyn Oo Weyn
19, 2008 at 6: 50 PM
Runtii way ku adag tahay shirkadaha inay cabiraan kaqeybgalka inkasta oo. Maaddaama badankood ay shaqaaleeyaan qof u ordaya ololahooda bulsheed (twitter, myspace, facebook, iwm) waxaa laga yaabaa inaysan garanayn waxa la cabiro. Haddii lataliyaha whiz bang uu yiraahdo way shaqeyneysaa, waa inay sax noqotaa? Ka dib oo dhan wuxuu ku celceliyaa sida weyn ee ay u socoto iyo in aan ka fikirno kordhinta miisaaniyadda xayeysiiska.